Fotoana famakiana: 3 minitra Ho an'ny mpamorona fampiharana Android, Google Play Experiment dia afaka manome fahitana sarobidy ary manampy amin'ny fampitomboana ny fametrahana. Ny fihazahana fitsapana A / B voaomana tsara sy voalamina tsara dia afaka mampisy fahasamihafana eo amin'ny mpampiasa mametraka ny fampiharana na mpifaninana aminao. Na izany aza, misy tranga maro izay nahitana fitsapana tsy araka ny tokony ho izy. Ireo lesoka ireo dia mety hiasa amin'ny fampiharana ary handratra ny zava-bitany. Ity misy torolàlana amin'ny fampiasana ny fanandramana Google Play ho an'ny fitsapana A / B. Fametrahana fanandramana Google Play Azonao atao ny miditra amin'ny